Umfelandawonye wezolimo waseTomsk "iSiberia Athens" uhlela ngo-2021 ukwethula umugqa wesimanje wokuqandisa imifino enomthamo wamathani ama-2 ngosuku; Kuzogxilwa kakhulu ekuqandeni amafriji aseFrance ngokunikezwa kwabo ukuhweba amanethiwekhi eRussian Federation nakwamanye amazwe, kusho usihlalo wobambiswano uZhanna Fedota etshela iRIA Tomsk.
Ngokusho kwakhe, e2019 umfelandawonye wezolimo uzuze isibonelelo somnyango wesifunda sokuthuthukisa inhlalo-mnotho yomuzi ngesamba sama-ruble ayizigidi ezingama-31 nasekota yokuqala ka-2021 uhlela ukwethula imigqa emibili yokukhiqiza yalezi zimali - okokuqandisa nokumisa imifino enomthamo wamathani amabili no-2 ngosuku, ngokulandelana. ...
I-X5 izokwenyusa ukukhiqizwa kokudla okulungiselelwe
“ERussia, ngokunokwenzeka, sizoba ngabokuqala (maqondana nokubanda). Imishini intsha, isebenza manje eChina kuphela. Sesithengile ingxenye futhi sihlela ukuyiletha lapha. Kuzoba yiqhwa ngaphandle kwamanzi - ukubanda kwe-ion-shock, ubuchwepheshe obuyingqayizivele. Sizomisa ama-fries aseFrance, izaqathe, ama-beet - njengoba sibambisene futhi sinamapulazi ethu ... Kuzogxilwa kakhulu kumafriji aseFrance, ”kusho usihlalo wale nhlangano.
Wachaza ukuthi eRussia, ukuphela kwesitshalo eLipetsk manje sesikhiqiza amafriji afriziwe, kepha kusetshenziswa ubuchwepheshe obuhlukile.
Ngokusho kuka-interlocutor we-ejensi, ekuqaleni kuhlelwe ukuthi anikeze imikhiqizo efriziwe emakethe yasekhaya - esifundeni saseTomsk nakwezinye izifunda zaseRussia, uma umfelandawonye ekwazile ukwenza isivumelwano nenkontileka enkulu yokuthengisa. Ngokuzayo, kucatshangelwa nokuthi kungenzeka kuthunyelwe imifino phesheya.
Source: I-RIA Tomsk
Tags: ukucubungula amazambaneUmkhiqizo wama-fries waseFranceIsifunda saseTomsk